नोबेल अस्पताल विराटनगरका ५५ स्टार्फ नर्सहरुद्वारा सामुहिक राजीनामा, किन? – PathivaraOnline
Home > समाचार > नोबेल अस्पताल विराटनगरका ५५ स्टार्फ नर्सहरुद्वारा सामुहिक राजीनामा, किन?
नोबेल अस्पताल विराटनगरका ५५ स्टार्फ नर्सहरुद्वारा सामुहिक राजीनामा, किन?
विराटनगर । विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालका ५५ जना स्टाफ नर्सहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।कोरोना सक्रमणको बेलामा पनि अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीहरुको उचित सुरक्षा नगरेको पारिश्रमिक कम दिएको हुनाले राजीनामा दिएको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले अस्पतालले समयमा तलव समेत नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
अप्mट्यारो परिस्थितिमा पनि दिन रात नभनी काम गर्दा समेत कामको मुल्याङकन नगरेको स्टाफ नर्सहरुले आरोप लगाएका छन् । स्टाफर्नसहरुले अस्पतालले समयमा तालिम समेत नदिएको र जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि कामको उचित सम्मान नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
यता अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालले भने ५५ जनाले राजीनामा दिएको स्वीकार्नु भएको छ तर राजीनामा स्वीकृत नभएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले स्टाफनर्सलाई मासिक १५ हजार पारिश्रमिक दिएको र उनिहरुले ५ हजार थप गर्न माग गरेको तर अस्पतालले ४ हजार थपगर्ने भन्दा नर्सहरुले अस्वीकार गरेर राजीनामा दिएको बताउनु भयो ।
काम गर्न केको लाज !अरुको घरमै लुगा धोएरनै महिनामा ५ लाख सम्म कमाउँने २८ बर्षिय युवाको रोचक कहानी(हेर्नुहोस भिडियो कुराकानी)